I-Zyro: Yakha Kalula Isizinda Sakho Noma Isitolo Se-inthanethi Ngaleli Platform Elithengekayo | Martech Zone
Ukutholakala kwezinkundla zokumaketha ezithengekayo kuyaqhubeka nokuhlaba umxhwele, kanye nezinhlelo zokuphatha okuqukethwe (CMS) azihlukile. Ngisebenze eziningana zokuphathelene, umthombo ovulekile, futhi okhokhelwayo CMS platforms phakathi neminyaka… ezinye emangalisayo futhi ezinye kunzima impela. Kuze kube yilapho ngifunda ukuthi izinjongo zekhasimende, izinsiza, nezinqubo ziyini, angenzi izincomo ukuthi iyiphi inkundla okufanele isetshenziswe.
Uma uyibhizinisi elincane elingakwazi ukulahla amashumi ezinkulungwane zamadola uma usebenzisa iwebhu, kungenzeka ukuthi usebenzise izinkundla ezilula ezingadingi ukubhala ikhodi futhi ube nezifanekiso eziningi ongazenza ngezifiso uwedwa.
Lapho ngimisa a indawo ye-spa onyakeni odlule, ngasebenzisa inkundla engangazi ukuthi izohlinzeka ngamathuluzi okusekela nawokuphatha adingwa yiklayenti lami. Yayingekho indlela yokuthi ngangizokwakha isayithi elidinga ukulungiswa njalo, ukubuyekezwa, kanye nokwenza kahle okuqhubekayo... njengoba umnikazi wayengenakukwazi ukukhokhela lelo zinga lomzamo.
I-Zyro: Yakha Iwebhusayithi, Isitolo Se-Inthanethi, noma Iphothifoliyo
Isixazululo esisodwa esithengeka ngendlela emangalisayo UZyro. I-Zyro inamanani ahlanganisa konke kanye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Uze uthole nokusekelwa kwengxoxo ebukhoma okungu-24/7 ngalo lonke uhlelo!
Hosting – Asikho isidingo sokuyothola umhlinzeki wokusingatha, inkundla ye-Zyro ihlanganisa konke. Ungathola nesizinda sakho ngesevisi yabo mahhala ngamanye amaphakheji.
Izibonisi - Zonke izifanekiso ze-Zyro zenziwe kahle futhi ziyaphendula ngeselula. Qala ngesifanekiso esingenalutho, noma khetha kuzifanekiso zesitolo, izifanekiso zesevisi yebhizinisi, izifanekiso zezithombe, izifanekiso zezindawo zokudlela, izifanekiso zephothifoliyo, izifanekiso zokuqalisa kabusha, izifanekiso zomcimbi, izifanekiso zekhasi lokubikezela noma izifanekiso zebhulogi.
Hudula Isihleli Somhleli - Ayikho ikhodi edingekayo, unokulawula okuphelele kokudala ngezifanekiso ezenziwe ngomklami ezingenziwa ngendlela oyifisayo umkhiqizo wakho kanye nemiyalezo.
Search injini - Zyro inkundla yokuphatha okuqukethwe inazo zonke izici kudingekile ukuze wenze isayithi lakho libe ngcono noma uthole izinjini zokusesha.
Umbhali we-AI – Hhayi umbhali omkhulu? Awusitholi nje isikhathi sokubhala? Vumela Umbhali we-AI akhiqizele iwebhusayithi yakho umbhalo ngenkathi uyakha.
eCommerce - Iphakethe le-ecommerce eliphelele, okubandakanya ukucubungula ukukhokha, ukuhlanganiswa kokuthumela, umphathi wobudlelwano bekhasimende (CRM), ama-imeyili azenzakalelayo, nokubika. Isitolo sakho singahlanganiswa kalula ne-Amazon, Facebook, ne-Instagram.
Security - Amasayithi avikelwe ngokugcwele ngesitifiketi sakho se-SSL nokubethela kwe-HTTPS, futhi ukuthengiselana kwe-ecommerce kuvikelwe futhi.
Ukubika Okujulile - Thola ukuthi ithrafikhi ivelaphi futhi uthuthukise ukuguqulwa kwakho ngamathuluzi afana ne-Google Analytics, i-Kliken, ne-MoneyData.
I-Zyro inezinhlelo eziningi ezithengekayo ngaphandle kwezindleko ezifihliwe.
I-Zyro inomnikelo ka-Black Friday oqala ngomhla ka-Novemba 15 kuya kuDisemba 7… sebenzisa ikhodi I-ZYROBF futhi wonge kufikela ku-86%!
Zama i-Zyro Mahhala!
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye UZyro futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: amazon storeCMSuhlelo lokuphatha okuqukethweZenzeledomainhudula bese udedela umhleliezokuhweba ngekhompyuthaukwenziwa kwe-ecommerceplatform ecommerceezentengiselwanoUkuhweba kwe-instagramyokusungulaukuphathwa kwempahlaesitolo onlineumakhi wesitolo onlineisiteji sesitolo se-inthanethiumakhi wewebhusayithi we-inthanethiukuthuthukisaisiza sephothifoliyoseoizinsizakalo zokuthumelaezentengiso yenhlaloizifanekiso zewebhusayithizyro
Circleboom Shicilela: Dizayina, Hlela, Hlela, Futhi Uzenzele Ngokuzenzakalelayo Ukumaketha Kwakho Kwemidiya Yomphakathi